Linux inonyanya kuzivikanwa kupfuura Windows mune yazvino Stack Kufashukira kuongorora | Linux Vakapindwa muropa
Stack Kufashukira, iyo yakakura uye inovimbwa nharaunda yevagadziri, yakaburitsa zvakabuda muongororo yazvo yegore izvo zvakaitika muna Ndira wegore rino.
Nekutora chikamu kwevanopfuura zviuru zana vanogadzira, ongororo yegore negore yaisanganisira misoro mizhinji yekufarira, kubva ku'maitiro akanaka 'mukugadzirisa kune huchenjeri hwekunyepedzera. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti mamwe masisitimu anoshanda uye matekinoroji ave akakurumbira kupfuura makore apfuura.
MySQL uye SQL Server inoramba iri dhatabhesi yakanyanya kushandiswa, Rust ndiyo inonyanya kudikanwa mitauro yemutauro yegore rechitatu rakateedzana, Redis ndiro dhatabhesi rinonyanya kudiwa kwegore rechipiri rakateedzana, uye Visual Studio Code isina kuiswa Visual Studio senzvimbo inozivikanwa kwazvo yekusimudzira.
Linux ndiyo chikuva chinonyanya kushandiswa pakati pevanogadzira
Kushamisika kwemunhu wese, Linux yakapfuura Windows seyakanyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa kuvandudza, maererano neiyo Stack Kufashukira ongororo Muhuwandu, Linux inoshandiswa ne48.3% yevagadziri, zvichienzaniswa ne32.9% gore rapfuura.
Nezve Windows, muzana rayo rakaderera kubva pa41.0% muna2017 kusvika pa35.4% gore rino, pane desktop uye server. Android iri munzvimbo yechitatu iine 29% ichiteverwa neMacOS iyo yawana 17.9%, ichiteverwa chete 2% kumashure naRasperry Pi ane 15.9%.
Ongororo iyi inoratidza zvakare kuti maAmazon webhu masevhisi, Amazon AWS, inozivikanwa kupfuura Google chikuva uye Microsoft Azure. Stack Kufashukira kune yakawanda yakawanda data kubva kuongororo yako mune yayo yepamutemo Webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Linux inonyanya kufarirwa kupfuura Windows mune yazvino Stack Kufashukira kuongorora
GNU / Linux ndiro zita rayo.